२१ बर्षमै जननिर्वाचित भएका नेपालकै कान्छो वडाअध्यक्ष प्रकाश रावलको यस्तो छ विकासको योजना ! (भिडियो सहित)
न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७५ जेठ २ बुधबार |
भक्तपुर, २ जेठ । विशेषत: युवापिढी देशको खबर राख्दैनन् । देश र दुनियाको खबरप्रति यसरी बेखबर बन्नु निकै नै लाजमर्दो कुरा हो । अझ सूचना र प्रविधिको क्रान्ति भइरहेको अवस्थामा, आफुलाई Hi-Tech युवा भन्न सुचाउने युवापिढी, भोलिको देश हाँक्ने युवा, देश र विश्वप्रति अनभिज्ञ र बेखबर भइ बस्छ भने त्यो देशको भविष्य कस्तो हुन्छ होला त ? सायद बेहाल नै हुन्छ होला।
के अहिलेको युवापुस्ताले गोदावरी, नगरकोट, पशुपतिको जङ्गलमा केटी घुमाउन मात्र जानेका हो? साकिरा, बिवर, एडम्सका गीतहरु बुझे-नबुझे पनि अरुको देखासिकी र लहैलहैमा लागेर अरुको नक्कल गर्दैमा युवापुस्ता आधुनिक हुन्छन् भन्ने सोचले कहिले सम्म प्राथमिकता पाउँछ।
नक्कल गर्दा अक्कल पनि पुर्‍याउने कि? जब हामीलाई आफ्नै धरातल, आफू जन्मेको माटोको राम्रोसँग ज्ञान छैन भने हावामा बनाएको जतिसुकै लोभलाग्दो महलको के मान्यता भयो र? के अर्थ रह्यो र?
‘नेपालको प्रधानमन्त्री को हो?’ भनेर कसैले सोध्दा 'I hate politics. I hate Nepali leaders. नेपालमा छिनछिनमा प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुन्छ। मलाई कसरी थाहा हुन्छ त को छ भनेर? भन्ने युवापुस्ताको ठुलै जमात छ अचेल ।
हिमेस रेसमियाको ‘नाम हे तेरा तेरा... अनि इमरान हास्मीको टङ किस अनि सन्नी लिओनले ‘लेला मे लेला’ भन्दै मिनिस्कर्ट हल्लाएको मात्रै हेरी बस्ने युवापुस्ता यसो देशमा के भइरहेछ भन्ने कुरामा एकदम अनविज्ञ छन्। इन्टरनेटमा च्याटमा रल्लिने र फेसबुकमा राम्री केटीको अनुहार देख्‍ने बित्तिकै फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउने, केटीको स्टाटसमा लाइक गर्ने अनि सुटुक्क ट्रिपल एक्स खोज्नु भन्दा त nagariknews.com, ekantipur.com, pnpkhabar.com हेरेको बेस तर राजनीतिक समाचार भन्दा फिल्मी समाचार प्यारो छ युवा पुस्तालाई।
युवापुस्ताको कर्तव्य भनेकै देशलाई सही बाटोमा डोर्‍याउने र नराम्रो काम गरेमा नेताहरुलाई खबरदारी गर्ने हो। तर धेरै जसो युवापुस्ता गैर जिम्मेवार बनेर नेपाल आमाले नै धिक्कार्ने काम तिर मात्र आकर्षित भएको पाइन्छ।
आजका नेपाली युवा हर कुरामा नेपालीहीन भएका छन्। नेपाली गीत सुन्यो भने आफ्नो ‘Prestige Down’ हुने एक किसिमको मनोरोगले ग्रस्त भएका छन्। साथीले के भन्ला, के सोच्ला भनेर ‘ह्या कवाडी नेपाली गीत पनि कसैले सुन्छ?’ सबै जसोको यस्तै रेडिमेड उत्तर हुन्छ अचेल। तर युवापुस्ताले कहिल्यै प्रयत्न गरेन होला नेपाली गीत सुन्ने र गहिराइमा पुग्ने। पक्कै पनि छैन।
अनि नसुनी,नबुझी त्यसै बित्थामा आरोप त लगाउनु कति सम्मको सहि हो। आजकल युवा पुस्तामा Phobia नै भइसकेको छ नेपाली भने पछि राम्रो हुँदैन भन्ने कुरामा। यो एउटा भयङकर रोग हो। यसको निदान राम्रोसँग भएन भने देशले भयावह स्थिति भोग्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ।
युवा पुस्ताले देशलाई गाली गर्दैमा, नेता सबै चोर, फटाहा हुन् भन्दैमा अनि विदेश पलायन हुँदैमा हाम्रो देशको समस्या समाधान पक्कै पनि हुँदैन। अरुलाई बुझ्न पहिला आफूलाई बुझ्नु जरुरी छ। तर खै युवा पुस्ताले कहिले आफूलाई नियाल्ने प्रयत्न गरेनन् सायद बिडम्बनाको कुरा। युवा पुस्ता ‘भविष्यका कर्णधार’ मात्रै होइनन्, वर्तमानका साझेदार पनि हुन् । तर दुखद कुरा युवा पुस्ताले देशलाइ बुझ्ने फुर्सद छ न त दुषित र धुमिल नेपाली राजनीतिलाई सफा गर्ने आँट नै।
‘समाचार पढ्ने, देशको बारेमा बुझ्ने, हेर्ने त बूढो भएर हो। अहिले त उमेर नै मोजमस्ती गर्ने, डिस्को धाउने, केटी घुमाउने,…गर्ने बेला हो। कसले सोच्छ देश र राजनीतिका कुरा, बेकारको झ्याउ लाग्दो, यसबारे सोच्ने त ६० कटेर हो…..’ यस्तो सोच हुन्छ धेरै जसो आम युवा पुस्ताको।
वास्तवमा युवा अवस्था भनेको त्यागको अवस्था हो। भविष्यप्रति लगानी गर्ने मौका हो। जोस र जाँगरले भरिपूर्ण युवा अवस्थामा देश र समाजप्रति केही योगदान दिनु पर्छ। युवाहरुमा अदम्य साहस छ तर त्यो साहस र बुद्दिमतालाई सही परिचालनको खाँचो छ। त्यस अनुरुप सरकारी नीति नियम बन्नु पनि जरुरी छ। यस्तै जोस र जाँगरले भरिपूर्ण युवा मध्य एक हुन् नेपालको प्रदेश नं. ७ को अति विकट ठाउँ बाजुराका वडाअध्यक्ष प्रकाश रावल।
राजनीतिका नकारात्मक पक्षलाई बेवास्ता गर्दै नेपालको प्रदेश नं. ७ को अति विकट ठाउँ बाजुराका वडाअध्यक्ष प्रकाश रावल आफ्नो कलिलो उमेरमा नै देश र जनताको लागि केहि गर्छु भनेर राजनीतिमा होमिएका छन्। उनी भर्खर २१ वर्षको भए। २१ वर्षकै उमेरमा वडाअध्यक्ष भएका प्रकाशको सोच कुनै पाको मान्छेको भन्दा कम छैन।
पढाईको कुरा गर्ने हो भने मोडीपालिका नगरपालिका वडा नं. ८ का वडाअध्यक्ष प्रकाश रावल अहिले केएमसीमा स्नातक तहमा अध्यानरत छन्। बाजुरा जिल्लाबाट ब्याचलर गरेका उनले पढदापढ्दै राजनीतिक यात्रा शुरुवात गरेको थिए । ने.बि संघ बाजुरा जिल्ला मोडीपालिकाको सदरमुकाम मार्तडीबाट राजनीतिक यात्रा शुरुवात गरेका रावल क्यामपस पढ्दा नै राजनीतिमा लागेको बताउछन्।
भौगोलिक हिसाबले पनि पिछडिएको जिल्ला बाजुरा बाटोघाटो देखि लिएर हरेक विकासको कुरामा पछि परेको छ। युवा जनशक्तिहरु कामको अभावले अनि घरको नाजुक पारिवारिक अवस्थाले गर्दा काठमाडौँ अनि काठमाडौँबाट विदेश पलायमान हुने गर्छन्।
तर, उनलाई विदेशको कुनै मोह छैन। यहिँ विलौना गर्दै प्रकाशले आफ्नो ठाउँमा रोजगारको सिर्जना गर्ने, भौगोलिक हिसाबले पनि विकास कार्य अघि बढाउने योजना बनाएका छन्। उनले युवा पुस्तालाई विभिन्न खालको तालिमको सिर्जना गरेर युवापुस्तालाई आफ्नै ठाउँमा रोजगार दिने रणनीति तयार पारेको बताए। उनी आफ्नै ठाउँमा बसेर केहि गर्न चाहान्छन्। आफु मात्रै हैन आफ्नो ठाउँको कोहि पनि युवा विदेशिनु नपरोस भनेर उनले आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास गरिरहेका छन्।
उनी भन्छन्','युवाले युवालाई नै प्रोत्साहन गर्नु पर्छ र एक युवाले भनेको अर्को युवाले मान्छ नै।' अब पालो हामी युवाहरु कै हो, आफ्नो ठाउँको विकास गर्ने पालो हाम्रै हो भन्छन् प्रकाश। अहिले उनी मोडीपालिका नगरपालिका वडा नं. ८ का वडाअध्यक्ष भए पछि हरेक वडामा बाटो पुगेको छ, कच्ची बाटो बिस्तारै पिच हुँदै छ, खानेपानी, कृषि, सिचाई, भेटेनरीमा समेत आमुल परिवर्तन आएको उनको दावी छ।
२१ वर्ष कै उमेरमा वडाअध्यक्ष भएका प्रकाश भविष्यमा व्यक्तिगत फाइदा नहेरी आफ्नै गाउँठाउँको विकासका लागि समर्पित हुने र जस्तोसुकै बाधाअर्चन आए पनि सहजै सामना गर्दै अघि बढ्ने अठोट लिएका छन्। उनी भन्छन् , '५ वर्ष पछि मेयरको दाबेदार हुन्छु त्यस पछि प्रदेश हुदै केन्द्र सम्म मेरो निरन्तर राजनीतिक यात्रा अगाडी बढ्नेछ। '
राजनीतिमा त्यही व्यक्ति सफल हुन्छ जसले समाज बुझेको छ । प्रकाश रावलले सामाजलाई राम्ररी बुझेका छन्। विभिन्न सामाजिक कार्यमा संलग्नता राजनीतिक व्यक्तित्व निर्माणको आधार हो। यहिँ निर्माण आधार पछ्छाउदै राजनीतिक नेतृत्वमा लागेका छन् उनी। स्वयंसेवी भावना भएका प्रकाश आफ्नो कार्यमार्फत नै समाजमा उज्यालो प्रकाश छर्न चाहान्छन्।
राजनीतिमा होमिएका प्रकाशमा नेतृत्व गर्ने क्षमता पनि उत्तिकै छ। नेतृत्वमा भएको व्यक्ति हुकुम दिने राजा हैन सबैको कुरा सुनेर सही निर्णय गर्ने नेता हुनुपर्छ । यस्तै उनमा अरूलाई नेतृत्व गरेर अगाडि बढाउने क्षमता भएकै कारण आज राजनीतिक हिसाबमा सफल पनि भएका छन्। जनता सामु, जनताकै भिडलाई सम्बोधन गर्ने वक्तृत्व कला भएका प्रकाश समूहमा काम गर्ने क्षमता र सामाजिक दक्षता, कोसँग कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने ज्ञान भएका व्यक्ति हुन्।